BBVA horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku isticmaasho kaararkeeda Apple Pay ee taleefankaaga iPhone | Wararka IPhone
BBVA iyo BancaMarch ayaa hadda hawlgeliyay adeegga Apple Pay ee kaararkooda. BBVA wuxuu ahaa bangiga weyn ee Isbaanishka ee aan wali ku biirin, in kasta oo horey loogu tilmaamay inuu ahaa "Dhawaan la heli karo" toddobaadyo. Hagaag, maanta waxay ahayd maalintii waxaanan hadda ku raaxeysan karnaa dhammaan dadka isticmaala Apple Pay iPhone oo wata kaararka BBVA.
Uma muuqato wax xaddidan nooca kaarka, taydu waa kaarka VISA-da oo sidoo kale waan hubiyay kaararka deynta ee qaraabada si sax ahna waa loo shaqeysiiyaa.
Xusuusnow in, Si aad ugu darto kaarka amaahda ama kaarka bangiga ee 'Apple Pay', waa inaad tagtaa barnaamijka 'Wallet app' ee ku yaal iPhone-kaaga oo riix + astaanta midigta sare Waad ku buuxin kartaa xogta gacanta haddii, sida aniga oo kale, nashqadda kaarka uusan u oggolaanayn akhrinta saxda ah ee kamaraddu. Muhiim maahan in lagu rakibo barnaamijka BBVA, maxaa yeelay waad xaqiijin kartaa inay iska leedahay adoo u mahadcelinaya lambarka SMS-ka. Dabcan sidoo kale waa la jaan qaadi kartaa Apple Watch. Si tan loo sameeyo, waa inaad ku dartaa barnaamijka Watch ee ku jira iPhone-kaaga ama ka dib markaad ku darto iPhone-kaaga. Maalintii oo dhan, waxaan sidoo kale filan karnaa cusbooneysiinta barnaamijka 'BBVA ama BBVA Wallet' kaas oo u oggolaanaya kaararka in lagu daro arjiga.
Spain, oo si xishood la’aan ah ugu bilaabatay Apple Pay, ayaa durba xirtay wareegga oo bangiyada waaweyn oo dhan hadda waxay leeyihiin adeegga Apple. Bogga Apple Pay ee Apple Pay ayaan wali la cusbooneysiin si loogu daro BBVA, laakiin waa wax iska caadi ah inay sidaa sameeyaan maalinta oo dhan, sidoo kale waxaa laga yaabaa inay xaqiijiso dhaq-dhaqaaqa BancaMarch, bangiga kale ee, oo ay weheliyaan BBVA, wuxuu ka hooseeyaa “Dhawaan la heli karo” . Ma awoodin inaan xaqiijiyo, maxaa yeelay ma haysto marin wax kaar ah hay'adda. Miyaad karti u yeelatay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » BBVA iyo BancaMarch hadda waxaa laga heli karaa Apple Pay
Firfircoonida ayaa lagu xaqiijiyay laba kaar oo BBVA ah.
Waxaan hadda isku dayay inaan dhaqaajiyo Visa-ga BBVA Repsol waxayna ii sheegaysaa inaysan weli la jaanqaadi karin. Waa Visa amaah.
DGF, taasi waxay ku dhacaysaa dhammaan ama aqlabiyadda, laakiin horay u soco oo arag inaad adigu dhaqaajin karto, iska dhegayso farriinta kuu sheegaysa inaysan is-waafaqsanayn
Gabadhayda ayaa horeyba u sameysay haatan. In kasta oo aakhirka ay leedahay ma waafaqsana, waxaan gujinay "Waan aqbalay" waana loo shaqeeyay si sax ah. Haddii uusan qof u oggolaan inuu ku adkeysto.
Malaha maxaa yeelay waa Visa Repsol; Caixabank waxaan awooday inaan kiciyo dhammaan kaararka deynta iyo kaararka deynta marka laga reebo Visa-ka Repsol.
Rob Lowe dijo
CLASSIC CX wuu shaqeeyaa.
Jawaab Rob Lowe